IINDLELA EZI-7 ZOKUCOCA IGUMBI LAKHO LOKULALA UKUZE UWE - UHLOBO
Iindlela ezi-7 zokuCoca igumbi lakho lokulala ukuze uwe
Ubusika buyeza, kwaye kunye nemozulu ebandayo eyothusayo yokuba ngaphandle kodwa ilungele ukuzisongela ebhedini ngekomityi yecocoa kunye nencwadi elungileyo. Iindaba ezimbi kukuba ukongeza indawo yokubasa umlilo kwigumbi lakho lokulala mhlawumbi ayiyonyani (ngakumbi ukuba uyarenta). Iindaba ezimnandi zezokuba zininzi iinguqulelo ezilula onokuzenza ukuguqula igumbi lakho lokulala libe yindawo emnandi, eyamkelekileyo oya kuba madolw 'anzima ukushiya. Nazi iimbono ezimbalwa esizithandayo.
1. Ubusika-ify ibhedi yakho.
Amathuba okuba ibhedi yakho yeyona nto inkulu (kwaye inefuthe elibonakalayo) kwigumbi lakho lokulala, ke ukutshintsha izinto zakho zokulala kuya kuba nefuthe elikhulu kwimo yegumbi. Into endiyithandayo yeyokulala ilinen - yonke loo nto intle kunzima ukuyibetha - kodwa iishaneli zeflannel okanye ikharethi yevelvet iya kwenza iqhinga. Jonga esi sithuba sikaMaxwell ngeetoni zeengcebiso zokutshintsha izinto zakho zokulala ukusuka ehlotyeni kuye ebusika.
Ukusuka ku-Anne & Richard's Lovation Loving e-El Dorado. (Ityala lemifanekiso: Jill Slater)
2. Okanye gcwalisa ibhedi yakho ngesixhobo esikhulu, esithuthuzelayo kunye nemiqamelo emhlophe qhwa.
Ke ndiyazi ukuba oku kuyaphikisana ngokupheleleyo neengcebiso ezikwi # 1 apha ngasentla ... kodwa enye indlela yokufumana inkangeleko entle oyinqwenelayo kukunxiba ibhedi yakho kumthuthuzeli omkhulu, otofotofo kunye nemiqamelo emininzi, yonke imhlophe. Umthamo yeyona nto ibalulekileyo kule nkangeleko - ufuna ukwenza ibhedi yakho ibonakale ngathi yinto onokuntywila kuyo. Kwaye yonke loo mhlophe iya kubamba ilanga lasebusika kwaye inike igumbi lakho lokulala ukukhanya okuhle.
3. Yongeza ukuphoswa koboya (okanye ingubo enkulu enithiweyo).
Akukho nto ithi icolile njengokugoba phantsi kwengubo enkulu, enzima. Ukuphosa uboya (okanye uboya obufihlakeleyo), obotshwe phezu kwebhedi, buya kongeza ubungqongqo kwangoko kunye nokuthungwa kwigumbi lakho lokulala. Okanye zama ingubo enkulu, enqamlezileyo-mva nje ndiluhlobo olunomdla kwezi zinto. Etsy inokhetho oluninzi olunomdla, onakho zenzele .
Ukusuka kuYesse's Bachelor's Pad. (Ityala lemifanekiso: Kim Lucian)
4. Cozify ukukhanya kwakho.
Ukukhanyisa kwenza umahluko omkhulu kangako kwivenkile yendawo. Yilungele ukuwa ngokufaka ukukhanya okuphantsi, okuthambileyo kwigumbi lakho lokulala- isibane sebhedi kunye nebhalbhu ye-watt esezantsi (40 okanye ezantsi) yindawo elungileyo yokuqala. Qiniseka ukuba ukhetha iibhalbhu ngeetoni ezifudumeleyo, nazo.
5. Imaleko yombhoxo kwiiragi.
Kungenxa yokuba umbhoxo omnye upholile, iiragi ezimbini zipholile kabini. Khetha imibala eyahlukileyo okanye iipateni ukuze imbonakalo ingalingani kakhulu. (Lo iya kuba ngumsebenzi olungileyo kwi IKEA ufele lwegusha , njengaleyo iboniswe ngasentla.)
Ibonisiwe Ukuhonjiswa kwe-Elle eSpain . (Ityala lemifanekiso: Elle Decor Espana )
6. Yamkela umxube wokuthungwa komhlaba wonke.
Iirugs, ukuphosa imithwalo, amakhethini - nantoni na eyongeza ukuthamba kunye nemvakalo iya kwenza igumbi lakho lokulala libe yindawo emnandi ngakumbi yokuzingela phantsi.
7. Yongeza ubumnyama obuncinci.
Kunzima ukuthi kutheni le nto (mhlawumbi kuba isikhumbuza ngesibeleko?) Kodwa imibala emnyama = intle. Coca igumbi lakho lokulala ngokongeza izinto zokulala okanye amakhethini ngombala omnyama… okanye ukuba uziva ukhaliphile, peyinta igumbi lonke.
IZiko lokuzonwabisa le-IKEA lihlangana neziko lombane
Umama Wami Uthenge Indlu Ngesihlandlo Sokuqala E-60-Nali Elinye Ingcebiso
Inombolo yeengelosi ezili-10 ezinentsingiselo
I-333 ithetha inani leengelosi
lithetha ntoni 11 11 kwiwotshi
Intsingiselo yenombolo 222